Mpijery vs Community: Fantatrao ve ny tsy fitovizany? | Martech Zone
Mpijery vs Community: Fantatrao ve ny tsy fitovizany?
Asabotsy, Jona 9, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nisy resadresaka nifanaovanay tamin'i Allison Aldridge-Saur avy ao amin'ny Chickasaw Nation ny zoma ary mamporisika anao aho hihaino azy. Allison dia niasa tamina tetikasa mahavariana tao anatin'ny fanomezana Digital Vision, nanoratra andiany iray momba azy Lesona amerikanina zanatany ho an'ny fananganana vondrom-piarahamonina.
Ao amin'ny ampahany roa amin'ny andiany, miresaka i Allison Mpihaino mifanohitra amin'ny vondrom-piarahamonina. Nanaitra ahy io ho iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny andiany iray manontolo. Tsy azoko antoka fa be loatra ny mpivarotra no miaiky fa misy fahasamihafana lehibe tokoa eo amin'ny mpihaino sy ny fiaraha-monina. Na eto Martech aza, manao asa mahafinaritra izahay amin'ny fananganana mpihaino marobe… fa tsy namolavola paikady hampivelarana fiaraha-monina iray.
Allison dia miresaka ny fahasamihafana misy eo fananganana ny mpihaino anao - fihainoana, fandraisana an-tanana, atiny misy ifandraisany, teboka tsy fivadihana, fanamafisana, toekarena manome, fanomezana ary fifandanjana hafatra. Ny sasany mety miady hevitra fa ireo no paikady ambadiky ny fananganana vondrom-piarahamonina… saingy misy fanontaniana iray izay hamaly raha manana iray ianao na iray hafa. Mbola hitohy ve ny fiarahamonina raha tsy eo ianao, tsy misy ny atiny, tsy misy ny insentif-nao, na tsy misy ny sanda ankapobeny entinao azy ireo? Raha TSIA ny valiny (mety ho izany angamba) dia mahazo mpihaino ianao.
Fananganana ny fiarahamonina misy anao paikady hafa mihitsy. Ny fitaovana fananganana vondrom-piarahamonina dia misy ny fanondroana ny tarika, ny hetsika ary ny isam-batan'olona, ​​amin'ny fampiasana jargon anaty, fananana ny tandindonao manokana, fampivelarana a nizara fitantarana, manana rafitra soatoavina, fombafomba, fananganana marimaritra iraisana ary loharanom-pahalalana. Ny vondrom-piarahamonina dia miaina mihoatra ny mpitarika, ny lampihazo, na koa ny vokatra (eritrereto Trekkies). Raha ny marina, nilaza zavatra tsy mampino i Allison raha niresaka taminy izahay… ny mpisolo vava marika eo amin'ny fiaraha-monina dia mety haharitra kokoa noho ny ekipa mpivarotra mihitsy!
Tsy midika akory izany fa ny fananana mpijery fotsiny dia zavatra ratsy… manana mpihaino tsara izahay ary feno fankasitrahana tokoa. Na izany aza, raha nanjavona ny bilaogy rahampitso, matahotra aho sao ho tonga koa ny mpijery! Raha manantena ny hampiorina fahatsapana maharitra isika, dia hiasa hampivelatra fiaraha-monina.
Ohatra lehibe iray amin'izany ny fampitahana ny famerenana vokatra hafa mifanohitra amin'ny Lisitr'i Angie (ny mpanjifanay). Ny ekipa ao amin'ny Angie's List dia tsy mibaiko hevitra, avelao ny hevitra tsy fantatra… ary manao asa miavaka izy ireo amin'ny fanelanelanana ny tatitra eo amin'ny orinasa sy ny mpanjifa mba hahazoana antoka fa voadinika tsara ny roa tonta. Ny valiny dia vondrom-piarahamonina tsy misy dikany izay mizara famerenana lalina an-jatony ny orinasa ifandraisany.
Rehefa nisoratra anarana manokana ho an'ity serivisy ity aho dia nieritreritra fa hijery zavatra toa an'i Yelp izay nisy lisitra iray tao anaty orinasa ary misy famerenana am-polony am-polony misy fehezanteny roa na roa eo ambanin'izy ireo. Fa kosa, ny fikarohana kely momba ny fantsom-boaloboka tao amin'ny faritra nisy ahy dia nahafantatra ireo mpitrandraka an-jatony maro izay nisy hevitra lalina an'arivony. Azoko natao aza ny nanenjana azy ho plumber miaraka amin'ny naoty tsara ho an'ny fametrahana heaters rano. Ny valiny dia nahazo heater rano be aho tamin'ny vidiny lafo ary tsy tokony hiasa saina aho sao ho voaviravira na tsia. Tamin'ny fifanakalozana iray dia nitahiry ny vola lany tamin'ny maha-mpikambana ahy nandritra ny taona.
Raha noho ny antony tsy ampoizina dia nanapa-kevitra ny hanidy ny vavahady ny Angie's List, dia tsy isalasalako fa ny vondrom-piarahamonina navoakan'izy ireo dia hanohy hanao ny asa mahatalanjona ataon'izy ireo amin'ny fitaterana valiny mahomby sy ara-drariny. Mety misy mpihaino marobe i Yelp sy Google… fa ny Listin'i Angie kosa dia manangana vondrom-piarahamonina iray. Hafa be izany.
Inona no ataonao?
Tags: mpihainofananganana mpanatrikachickasawFirenena Chickasawfiaraha-moninafananganana vondrom-piarahamoninahaino aman-jery sosialypaikadin'ny media sosialy
Fitsipika momba ny fiainana manokana ao amin'ny tranonkala
Fitaovana marketing amin'ny mailaka 3 tokony ho fantatrao
Jun 15, 2012 ao amin'ny 12: 13 PM
Azoko antoka fa manantena aho fa hanangana vondrom-piarahamonina iray. Mila zavatra maniry aho na dia tsy eto intsony aza aho. Mampiseho izany fa nanao zavatra mendrika hotohizana aho.
Sep 10, 2012 ao amin'ny 12: PM PM
Marina tokoa - mila mampientanentana ny olona ianao (na mihoatra) momba ny fiarahamonina misy anao. Tena izany no fandehany rehefa mitantana ny orinasanao ihany koa ianao. Raha afaka miala amin'ny birao mandritra ny herinandro aho ary mandeha tsara ny orinasa raha tsy misy ahy, fantatro fa nanao zavatra tsara aho.